စိတ်နှောင့်အယှက်ကြောင့် ပူလောင်ရတဲ့အခါ – Live the Dream
ဆောင်းပါး နှင့် သတင်းများ ,ဆောင်းပါးများ
ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့လူတွေမှာ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့သူတွေ၊ သူတို့ရဲ့အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေက ကိုယ့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာတွေ ကြုံကိုကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးတော့ စိတ်ထဲမှာ တော်တော်လေး ကသိကအောက် ဖြစ်သွားတယ်? စိတ်ထဲမှာ မကျေမချမ်း ဖြစ်သွားတယ်? ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
ဒီလူတွေကို ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ကြလဲ?။ ဦးကျော်ဟိန်းဇာတ်ကားထဲကလို မီးကိုမီးနဲ့ ငြှိမ်းပစ်မယ်ဆိုပြီး ချက်ချင်းပဲ ခက်ခက်ထန်ထန်ပြန်ပြီး ဆက်ဆံသင့်လား။ အဲ့လို ချက်ချင်းမဆင်မခြင် တုံ့ပြန်တာက တကယ့်အရှုံးသက်သက်ပါ။ တစ်ခုသတိထားရမှာက ကိုယ့်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ထင်နေတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်သလို အရေးမပါတဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ် မပါသူတွေဖြစ်ဖြစ် အကောင်းဆုံးစိတ်ထားပေးနိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးက အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က စိတ်မထားတတ်ပဲ မကျေနပ်မှု စိတ်အစိုင်အခဲလေးတွေ များလာမယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်ချိန်တော့ သူတို့နဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မခေါ် နိုင် မပြောနိုင်လောက်အောင် မလိုလားအပ်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး ပျက်ပြားမှုတွေအထိတောင် ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းပြီး အောင်မြင်မှုရသူတိုင်း ဒီလိုမျိုး လုံးဝအဖြစ်မခံပါဘူး။စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ် သန့်သန့်ရှင်းရှင်းပဲ ထားကြတယ်။ စိတ်သဘောထားပြည့်ပြည့်၀၀ ထားတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေချင်ကြတာပေါ့။ ဘယ်သူကများ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ချင်ပါ့မလဲ? ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ကြတာပေါ့။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ ဘာတွေလုပ်ရမလဲ မသိချင်ဘူးလား?? ကဲ ဒီတော့ ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းသင်တဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ထင်ရင် ဘယ်လိုစိတ်ထားရမလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ရမလဲဗျာ ကြည့်လိုက်ကြစို့….
ပညာသင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် နေရာဒေသ အသီးသီးကလူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမှာဖြစ်လို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စရိုက်ချင်းလည်းမတူနိုင်ပါဘူး။ နေရာဒေသ တူတယ်ထားဦးတော့ မိသားစု တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု စရိုက်ချင်းကွာပါတယ်။ လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုးဆိုတဲ့အတိုင်း မိသားစုမှာတောင် လူတစ်ယောက်ကိုစိတ်တစ်မျိုးစီနဲ့ပါ။ ဒီတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့အချိန်တွေရှိနိုင်သလို ကိုယ်စိတ်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ အချိန် နဲ့လည်းကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုသိထားရမှာက ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေက ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်ကောင်းပြင်လို့ရနိုင်ပေမဲ့ တစ်ခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့ အကျင့်စရိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကိုတော့ မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် သူ့ရဲ့အပြုအမူတွေက သူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်အရကြောင့် ဘာလို့ ကိုယ့်စိတ်ကို ညစ်ညမ်းဖို့အခွင့်ပေးမှာလဲ? ကိုယ်လည်းပြောင်းလဲလို့ မရဘူးလေ…။ ဒီလိုအတွေးလေးကိုယ့်မှာရှိနေရင်တော့ တစ်ခြားသူက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနှောင့်ယှက်ပါစေဦးကွာ မသိချင်ဟန်ဆောင်နေတာမျိုး၊ ရှောင်ထွက်သွားတာမျိုးလုပ်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမထိခိုက်စေတဲ့ နည်းတွေရှိပါတယ်နော်။
၂။ လူစိတ်ဆိုတာ မျောက်စိတ်
အပြောင်းအလဲ မြန်တဲ့ လောကကြီးမှာ နားလည်ရအခက်ဆုံးက လူ့စိတ်ပါပဲ။ ဒီနေ့ ကိုယ်နဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောဆိုနေတဲ့သူက နောက်နေ့စိမ်းစိမ်းကားကားဖြစ်သွားတတ်တာပဲ။ ဒါကို ဗွေယူလို့မရပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တောင် အံသြလောက်အောင် တစ်ခါတစ်လေ အကောင်းမြင်တတ်ပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေ အဆိုးမြင်နေတတ်တယ်။ မဝယ်ခင်က ပစ္စည်းတစ်ခုကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းလိုချင်ပေမဲ့ ရလာတဲ့အခါ မကြိုက်တော့တာမျိုးတောင်ဖြစ်တတ်သေးတာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်အချိန်အကုန်ခံ စိတ်ဒုက္ခခံပြီး အနှောင့်အယှက်တစ်ခုလို လိုက်ခံစားဖို့မလိုဘူး။ ကိုယ့်အပေါ်ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာပဲလုပ်ပြီး လူတွေရဲ့စိတ်က မျောက်စိတ်ပါကွာဆိုတာကို ခေါင်းထဲထည့်ထားလိုက်ပါ။ ဒါဆို ကိုယ်လည်းစိတ်ချမ်းသာရပြီး ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေးအတွက်ပဲ အာရုံစိုက်လို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ဘယ်လိုရှိလဲ
တစ်ချို့သောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွေ မရင့်ကျက်သေးတဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဘဝအတွေ့အကြုံအရ၊ ကိုယ့်ရဲ့ဗဟုသုတအရ၊ ကိုယ်ကြီးပြင်းလာတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အရ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုရှိတတ်တာက သဘာဝပါ။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခါတစ်လေ အသိဉာဏ်ရှိရှိ မတွေးတော မဆင်ခြင်မှုကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းစေချင်လို့ပြောတဲ့စကားကို ဆဲတာလို့ ထင်တတ်ကြပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်အခြေအနေ၊ ကိုယ့်အမြင်၊ ကိုယ့်အသိဉာဏ်တွေကို ကိုယ်ပြန်မမြင်တတ်တဲ့ လူတွေလုပ်တဲ့ အပြုအမူတွေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမှုတွေကြောင့် တစ်ခြားသူရဲ့အပြုအမူ အပြောအဆိုတွေက အနှောင့်အယှက်တစ်ခု ဖြစ်စေတာလားဆိုတာ ပြန်လည်ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိရပါမယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နည်းပါးလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်၊ ကိုယ့်အမြင်တွေကိုကိုပြန်လည် ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက တစ်ဖက်လူကိုလေးစားရာရောက်သလို ကိုယ့်အတွက်လည်း စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာ၊ ပြဿနာဖြစ်စရာ၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပျက်ပြားစရာ အကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူး။
လူတစ်ယောက်နဲ့ရင်နှီးကျွမ်းဝင်ဖို့ ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုတာ စကားနည်းတဲ့သူတွေ၊ လူတောတိုးဖို့ကြောက်တဲ့သူတွေအသိဆုံးပါပဲ။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့ဆိုတာခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်သလောက် ပျက်စီးဖို့ကျတော့ လွယ်ကူတဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒီတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုတန်ဖိုးဆိုတာ ကိုယ့်ဘဝမှာ တော်တော်လေး ကြီးမားပြီး အရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ ဒါ့ကြောင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ စိတ်အခန့်မသင့်လို့ တစ်ဖက်လူကို ဘာမှမတုံ့ပြန်ခင်မှာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဘယ်လောက်အရေးပါလဲ၊ ဘယ်လောက်ထိရင်းနှီးတဲ့လူလဲဆိုတာ ပြန်လည်တွက်ချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသားသူ၊ ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့သူတွေက ကိုယ့်ကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ဆိုရင် သူနဲ့ကိုယ်ဆက်ဆံရေးမှာ ဘာတွေများမှားယွင်းနေလဲဆိုတာပြန်တွေးပြီး ပြင်ဆင်စရာရှိတာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ကိုယ်နဲ့သိပ်မရင်းနှီးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ့်ဘဝအတွက်အရေးမကြီးတဲ့သူတွေဆိုလည်း ဘာပြဿနာမှာဖြစ်စရာမလိုပဲ ဝေးဝေးရှောင်သွားလိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကိုင်းကျွန်းမှီ ကျွန်းကိုင်းမှီ မှီခိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေပါ။ အခုအချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက် ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူက နောင်တစ်ချိန်ကိုယ့်အတွက် ထင်းခွေမကြုံ ရေခပ်ကြုံ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ သူဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတန်ဖိုးက ကြီးမားတယ်လို့ပြောတာပေါ့။ မီးကိုမီးနဲ့တော့မငြှိမ်းပါနဲ့ ရှောင်နေလိုက်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ဘာကြောင့်လဲ ဘာလို့ ငါ့အပေါ် ဒီလိုပြုမူဆက်ဆံရတာလဲ? ဆိုတာကိုအဖြေရှာဖို့မတွေးပဲ ဝုန်းဒိုင်းကြဲ ပြန်လည်တုံပြန်ချင်တာက ကျွန်တော်တို့ဘယ်က သင်ယူခဲ့တာလဲဆိုတာမတွေးတတ်တော့ဘူး။ စိတ်ဆိုးနေတဲ့ သူတစ်ယောက်က ဘာကြောင့် စိတ်ဆိုးရလဲဆိုတာ သူ့မှာအကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေတဲ့ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေက ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ? သူ့ရဲ့ အချစ်ရေးအဆင်မပြေတာကြောင့်လား၊ အိမ်ထောင်ရေးကြောင့်လား၊ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုကိစ္စကြောင့်လား ဒါတွေကို သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့အခြေအနေကို နားလည်လက်ခံနိုင်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ အပြုအမူအပြောအဆို အဆင်မပြေတာကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုလို ထင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါက နှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးလည်းမပျက်ပြားနိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး Skill ပိုမိုတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဘယ်လိုအရာတွေက အနှောင့်အယှက်လဲ?? ဘယ်လိုစိတ်ထားရင်အကောင်းဆုံဖြစ်မလဲ?? အားလုံးသိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်။ စိတ်အေးချမ်းပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေဗျာ..